Podcast: Shinoa Biloagera Mifampitafa · Global Voices teny Malagasy
Podcast: Shinoa Biloagera Mifampitafa
Voadika ny 16 Novambra 2017 6:08 GMT
Haxi, Shinoa bilaogera (ankavia) no nanadihady an'ilay bilaogera monina ao Hangzhou, Leylop (havanana), iray amin'ireo shinoa bilaogera nanoratra voalohany ny bilaogy tamin'ny teny anglisy. Eto ny fitantaran'i Leylop an'ilay antsafa. Azonao renesina ato (MP3, 5MB).
FANAVAOAZANA: Tsipihan'i Halley Xie fa ny dika voalohany sy feno amin'ilay antsafa dia tao amin'ny Chinastic.com (tranonkala efa nakaton'ny fanjakàna), tranonkala izay izy no mpamoaka lahatsoratra tao.
Ny fiainany andavanandro, ny mozika, ny kolontsaina ary ireo fivahinianana any ivelany sy ny fomba fijeriny ny tontolo amin'ny maha-tovovavy Shinoa azy no tena ifantohan'i Leylop. Vakio ny lahatsorany farany miresaka momba ny asany miaraka amin'ireo vahiny mpampianatra teny Anglisy ampiasaina mba hampianatra tany amin'ireo toby fampianarana teny vahiny mandritry ny fahavaratra. Soritsoritany ao ny fomba fandraisan'ny Shinoa ireo mpitsidika tsy teratany Shinoa, ary ny fomba fijeriny ny fiovàn'ny dikan'ny hoe “vahiny” rehefa nandeha ny andro sy ny taona. Amin'ny maha-vao haingana ny nahazoany diplaoma, mety ho fanokafana ny maso amin'ny tontolo tena izy ilay asa. Manoratra izy hoe :
Iray volana niasàna sahady, ampy tsara hahitàna ny lafiny mahatsiravina amin'ny fiarahamonina. Any amin'ny birao, manao doka amin'ny varotra telefaona izahay, ary dia mahazo antso tsy mahafinaritra ihany koa mandritry ny fotoana rehetra. Ohatra, ilay fantsom-pahitalavitra lehibe indrindra niantso anay, nangataka raha toa izahay mba te-hanao tatitra momba ilay toby mandritry ny fahavaratra, afaka mandefa olona iray hitondra kamerà ry zareo aorian'ny andro voalohany, manamboatra izany ho vaovao maharitra iray minitra ary mandefa azy amin'ny fotoana maha-be ny mpijery. Mazava loatra fa mila mandoa ny sarany izahay– 8000 kuai isaky ny minitra. Mametraka dokambarotra aminà gazety tena malaza iray eto an-toerana izahay, ary ny tombony ho anay dia mety ho vaovao hahatratra voanteny 400 no hosoratany ho anay ao anatin'ny fandaharan-dry zareo miresaka fanabeazana… Tena mandiso fanantenana ny mahita ny fomba fiasan'ny media. Ankehitriny aho manana maso maranitra kokoa rehefa mamaky gazety, afaka milaza hoe misy vaovao faikany maro mivoaka any. Aiza ny fahamendrehan'ny media? Noho ny antony politika sahady, sivanin'ny governemanta ny media, ankehitriny vao mainka maharatsy ny toedraharaha ny resaka vola sy tsena.